အရှေ့တောင်အာရှတွင် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဆိုင်ရာ ရှာဖွေကုသခြင်းလုပ်ငန်းများအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
ထိုရောဂါသည် နည်းပါးသည့်ဝင်ငွေနှင့် လူဦးရေအချိုးအစား မမျှသည့် နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လျှက်ရှိသည်။ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကြောင့် သေဆုံးမှုများ၏ လေးပုံသုံးပုံသည် ဝင်ငွေအလယ်လတ်နှင့် ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားကြသည်။
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများနှင့် ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများအပေါ် စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာခြင်းက “ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ရှာဖွေကုသခြင်းလုပ်ငန်းများ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း (SUNI-SEA)” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် သုတေသနစီမံကိန်းတစ်ခုကို ဥရောပနှင့် အရှေ့တောင်အာရှမှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ကိုးနိုင်ငံ၏ ပူူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖော်ဆောင်နိုင်စေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လေးနှစ်တာသုတေသနစီမံကိန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
SUNI-SEA စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအစီအစဉ်များ၏ ထိရောက်အကျိုးရှိမှုနှင့် တွက်ခြေကိုက်သော အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းမဟာဗျူဟာများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီး သက်သေခံရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အရှေ့တောင်အာရှမှ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချ က်ပန်းတိုင်(SDGs) အောင်မြင်စေရေးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအား မြှင့်တင်ရာတွင် အဆိုပါတွေ့ ရှိချက်များကို ပြန်လည်အသုံးချရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပနိုင်ငံများတွင် နာတာရှည်ရောဂါများကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာမှုများနှင့် ကြုံနေရစဉ် အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ဆီးချိုရောဂါများ ပြန့်ပွားမှုကို အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ပင် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ထူးခြားဆန်းသစ်သော မဟာဗျူဟာများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့်
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကာကွယ်ကုသရေးကို ဆေးရုံများမှ ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများထံ ကူးပြောင်းစေခြင်း
လူမှုအသိုက်အဝိုင်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆောင်ကြဉ်းပေးခြင်း
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ကာကွယ်တားဆီးမှုနှင့် လက်တွေ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်း
အဆိုပါနိုင်ငံများအနေဖြင့် ကဏ္ဍများအကြား ထူးခြားဆန်းသစ်သော စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကျိုးရလဒ်များ ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးစားလျှက်ရှိသည်။ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုနှုန်းများကိုလျှော့ချရာတွင် အလားအလာအရှိဆုံးဖြစ်လာစေမည့် ကိုက်ညီသော သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု၍ အစပျိုးဆောင်ရွက်သွားရန် အရှေ့တောင်အာရှရှိ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများက မျှော်လင့်ထားပါသည်။
သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါများ ကာကွယ်တာဆီးရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကို SUNI-SEA မှ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အကြံပြုချက်များထွက်ပေါ်လာစေခြင်းအလို့ငှာ ရှိရင်းစွဲလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ဆဲအစီအစဉ်များကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပဏာမ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိလုပ်ငန်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်တင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စေ့စပ်စွာ စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
SUNI-SEA သုတေသနစီမံကိန်းတွင် အဓိက ခေါင်းစဉ်သုံးခုရှိပါသည်
သွေးတိုးနှင့် ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါများ တားဆီးကာကွယ်ကုသရေးအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၏ ထိရောက်အကျိုးရှိမှု။ စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူများထံ ပိုမိုရောက်ရှိခြင်းဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို လက်လှမ်းမီလာစေရေးအတွက် နိုင်ငံများမှ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ?။ လူအများလက်ခံနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများပေးရာတွင် အတားအဆီးများကို မည်သ့ိုဖယ်ရှားနိုင်သလဲ?။ ရပ်ရွာအဆင့်နှင့် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံး၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးကို မည့်သို့မြှင့်တင်နိုင်သလဲ?။
သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုးသွေးချိုရောဂါများ တားဆီးကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ တွက်ခြေကိုက်မှု ၊၊ နိုင်ငံများအနေဖြင့် ငွေကြေးနှင့်ထိုက်တန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိစေရန်နှင့် ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို မည်သို့ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲ။ ယခုအခါတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်နိုင်ငံများတွင် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကြောင့် ကြီးမားသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်များကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ မည်သည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများက ပိုကောင်းနိုင်သလဲ။ ဤအခြေအနေတွင် ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် မည်သို့ အကောင်းဆုံးငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနိုင်သလဲ?။
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချက်များ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများကာကွယ်ကုသရေး အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အထားအခြေပြုနည်းလမ်းများအပေါ် အထူးဂရုပြုခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်ကုသခြင်းတွင် ရေရှည်တည်တံမှုနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထူးခြားဆန်းသစ်သော ချဉ်းကပ်မှုအတွက် အဆိုပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
ထိရောက်အကျိုးရှိမှု၊ တွက်ခြေကိုက်မှုနှင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါနှင့်ပက်သက်သည့် ကမ္ဘာ့ ယန္တရားများ စသည့် အဓိကခေါင်းစဉ်သုံးခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထိရောက်မှုသုတေသနပေါင်းစပ်ခြင်းခြင့် ချည်းကပ်ပါဝင်မှုများနှင့်အတူ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ထို့ပြင် အရည်အသွေးနှင့် အရည်အတွက်အခြေပြုအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အတွက် ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
SUNI-SEA မှ သုတေသနအစီစဉ်
ခေါင်းစဉ် သုံးခုစလုံးအတွက် အောက်တွင်ပြသထားသည့် အချက်လက်များအတိုင်း တူညီသော သုတေသနလုပ်ငန်းအစီစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(က)ပြန်ပြောင်းလေ့လာခြင်း။ ။ ဤ ပြောင်းလဲမှုအဆင့်တွင် အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို ၊ သွေးချိုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားသောရောဂါပြဿနာများကို လျှော့ချရန် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူမှု့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲ စဦးလုပ်ငန်းများကို ခြုံငုံသုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူများအကြားရောက်ရှိစေခြင်း၊ မကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အသိပေးလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ပေးခြင်းတို့တွင် မည်သည့်လုပ်ငန်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း? မည့်သည့်လုပ်ငန်းများက ငွေကုန်ခံရကျိုးနပ်စေသလဲ? ဤတွင် ထိရောက်အကျိုးရှိမှုနှင့် တွက်ခြေကိုက်မှုအလေးထားသည့် ယူဆချက်များကို သက်သေပြရန် အကြောင်းအရာဆိုင်ရာလေ့လာမှု၊ နိုင်ငံများမှ ရှိနှင့်ပြီးအချက်အလက်များအပေါ် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုနှင့် အခြေခံအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများအနေဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် စောင့်ရှောက်မှုအရည်သွေးကို ခြုံငုံအကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ)အခြေခံဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း။ ။အဆိုပါ ပြန်ပြောင်းလေ့လာခြင်းက လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကာကွယ်ကုသရေး အစီစဉ်များ နှင့် မူဝါဒများ၏ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း အဖြေထွက်ပေါ်လာပါမည်။ နိုင်ငံများအတွက် အကျိုးအရှိဆုံးကို မည်သည့်အရာက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်သလဲ။ လုပ်ငန်းများအရှိန်မြှင့်တင်ရာတွင် မည်သည့်အရာက နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသလဲ။
(ဂ)မျှော်မှန်းလေ့လာခြင်း။ မျှော်မှန်းလေ့လာခြင်းတွင် သုတေသီများအနေဖြင့် လူမှူ့အသိုင်းဝိုင်းများ၊ ပဏာမ ကျန်းမာေ ရးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အတူတကွဆောင်ရွ က်မည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကို ဖော်ဆောင်ပေးသည့်အလားလာအရှိ ဆုံးကာကွယ်ကု သရေး အစီစဉ်များ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကို အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ဆင့်ပွားဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးကာကွယ်ကုသရေး အစီစဉ်များကို ပိုကြီးသော အဆင့်ထိ မည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) မူဝါဒအတွက် တွေ့ရှိချက်များနှင့် သင်ခန်းစာများ ။ ။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် SUNI-SEA မှ မူဝါဒအတွက် သင်ခန်းစာများရေးဆွဲကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု တိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ဖန်တီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။